Ego ole ka ọ na-eri iji wuo igbe igwe kwụ otu ebe? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Klaasị okirikiri ụlọ ụlọ - ihe ngwọta
Klaasị okirikiri ụlọ ụlọ - ihe ngwọta
Ego ole ka ọ na-eri iji wuo igbe igwe kwụ otu ebe?
Ndị na-eri aigwe kwụ otu ebe'Wuru site na ọkọ' amalite na $ 1000. Anyị na-eji ihe dị ka $ 500 na 'ọhụrụigwe kwụ otu ebeakụkụ ”na“ e jietiti igwe kwụ otu ebe”. Will ga-aga nzọụkwụ site na ịhọrọ site na ịhọrọ aetitiịtụ na ịwụnye akụkụ.
Esi ewu igwe kwụ otu ebe. Andrew Denham, m n’azụ, bụ onye guzobere Bicycle Academy na ọ ga-abụ onye nkuzi anyị taa. Andrew, adị m njikere ịgbado ọkụ n'ihe nke abụọ. Huh. (ngwa ngwa egwu egwu) - Tom, m mara mma na ilele ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta igwe kwụ otu ebe ma hụ tebụl geometry na ịmara ma igwe kwụ otu ebe ga-adabara m ma ọ bụ otu mpempe akwụkwọ ma ọ bụ oghere ọcha ma na-amalite site na ọkọ na-eme m -eme ka obi dị mma n'ezie a bit ne rvous.
Ma olee otu i si eme nke ahụ? Kedu ka esi enweta geometry ziri ezi? - O doro anya, ya mere ọ bụ akụkụ mara mma nke usoro ahụ. Ihe mbụ anyị ga-atụle bụ ọnọdụ nke onye ọkwọ ụgbọ ala. - Ọ dị mma - anyị kwesịrị ijide n’aka na ahụ gị nọ n’ọnọdụ kwesịrị gị ka ị jiri igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ dabere n ’ụdị igwe kwụ otu ebe ọ bụ.
Ya mere, mgbe anyị ga-esi ike ike udi nke ịkpọtụrụ gị na. chee igwe kwụ otu ebe, yabụ anyị nwere nkwado ndabere nke ejiri cranks ahụ, sadulu, - ee. - azuokokoosisi nwere ụfọdụ aka ịnyịnya ibu na ebe anyị nwere ike itinye aka iji kwado onye na-agba ya kamakwa ụdị igwe kwụ otu ebe ọ bụ isi akụkụ - ee, ruo ugbu a, amaara nke ọma.
Amaara m nọmba ndị a niile ma enwere m obi ike, mana olee otu anyị nwere ike isi tinye obere ntakịrị ọnụ na ntakịrị ntakịrị ma mara na igwe kwụ otu ebe ga-agba ịnyịnya na njedebe nke ụbọchị? ? - Enweghị azịza ọsọ ọsọ na nke ahụ, yabụ ọ na-ewe ọtụtụ iterations. Thingsfọdụ ihe anyị ga-achọ ịtụle na mbụ. Ya mere chee echiche banyere otu ị chọrọ ka igwe kwụ otu ebe siri kpaa agwa n'okporo ụzọ, ọkachasị etu ọ na-esi emetụta ihe ntinye ndị na-agba ike.
Anyị kwesịrị iche echiche banyere akụkụ kachasị mkpa, ndị a bụ oche ụkwụ na ụzọ igwe, nke na-akọwa ụdị nkwụsi ike na-aga n'ihu yana nkwụsi ike nkuku. - Ọ dị mma, yabụ anyị nwere isi okwu anyị ebe a. M ka na-echegbu onwe m, Tom, olee otu m ga - esi weta ya niile wee mee ya - - O doro anya, yabụ mgbe anyị niile nwere aha ma nwee obi ụtọ na ọnọdụ onye ọkwọ ụgbọ ala, ka anyị lelee usoro CAD na anyị chepụta jiometrị, na n'ikpeazụ gaa na Ọdịdị nke etiti ahụ ma kpokọta ụfọdụ iberibe ígwè ọnụ - ọ dị mma - ọ dị mma ozugbo anyị nwetara ozi dabara adaba na nnọkọ dabara adaba anyị mere anyị nwere ike itinye ya n'ime ụdị ahụ ka ọ na-edozi ọnọdụ nke onye na-agba ya ma mee ka anyị nwere onwe anyị, mepụta jiometrị nke igwe kwụ otu ebe maka akọwapụtara ka anyị wee nwee ike ịhazie ọdụ ụkwụ ụkwụ, anyị nwere ike ime nke ahụ wee gbanwee ogologo ogologo ogologo, dịka ọmụmaatụ - ịmara ihe ọnụ ọgụgụ ndị a kwesịrị, ihe a bu oru ma obu, imara, nwere ike? You na-edegharị ha site na igwe kwụ otu ebe? - Y’oburu na ibido n’enweghi onu ogugu n’obi, igha iji igwe kwụ otu ebe bu uzo zuru oke.
Ọ bụrụ na ịnwere ike ịgba ịnyịnya ígwè n'oge gara aga na ị masịrị ụzọ ọ dị, ị nwere ike ịbanye n'ime, ọ bụrụhaala na ị na-akpachara anya na nha ị nwekwara ike ileba anya na wiil na ụfọdụ akụkụ ndị ọzọ wee nweta otu Nwee mmetụta maka ihe igwe kwụ otu ebe a bụ na ọ bụ ebe mara ezigbo mma ịmalite, ee. (ngwa ngwa egwu egwu) - Nzọụkwụ abụọ nke usoro a ma anyị nọ ugbu a na nhọrọ nke ọkpọkọ maka etiti anyị. Ugbu a, anyị nwere obi ike na eserese CAD nwere akụkụ ziri ezi, ọbụlagodi na ọnọdụ nke ngwugwu karama ahụ, iji hụ na anyị nwere ike ịnweta karama abụọ n'elu osisi anyị.
Ma ugbu a, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche tubing dị iche iche, yabụ anyị ga-ahọrọ ndị ziri ezi? Anyị na-arụ ọrụ na ígwè ma anyị ga-eji ọkpọkọ si Columbus, ụlọ ọrụ Italiantali. Ha na-enye ọtụtụ narị na narị otu narị nhọrọ ọkpọkọ dị iche iche, ma na usoro nke alloys dị iche iche, ya mere n'ezie ntakịrị nsụgharị dị iche iche nke nchara - ọ dị mma - na kwa ogologo dị iche iche, dayameta dị iche iche, mgbidi dị iche iche na ihe ndị yiri ya. Yabụ, na mgbakwunye na nke ezigbo igwe kwụ otu ebe, anyị kwesiri ịmara ibu ọ ga-agabiga, otu ị dịruru arọ, ike ị na-agba ma yana ike dị elu ma ọ bụ dị ala na-ewepụta yana ọ masịrị gị. ịgbachapụ, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụ chọọ ịrị elu nke ịnyịnya ahụ ma ọ bụ pụọ na sadulu ahụ, nke bụ ọkacha mmasị gị - Ọ dị mma n'ihi na ọ bụ nghọtahie a na-ahụkarị, ị chọghị, na ị ga-enweta ngwongwo tubing, sịnụ Columbus XCR, nke bụ mee nke igwe anaghị agba nchara, ọ ga-enye gị ụfọdụ ịnya ogo ma ọ bụrụ n'eziokwu na ị nwere ike ịgbanwe ntụgharị nke dayameta nke tubes na ụdị nke tubes na ọbụna ogologo nke tubes na nke ahụ ga-abụ ihe na-eme igwe kwụ otu ebe gị ka ọ dị ya na-agba ịnyịnya. - Kpamkpam, ee.
Ngwakọta dị iche iche nwere ihe dị iche iche, na-enye onye mmebe ma ọ bụ onye nwe ụlọ ọtụtụ nhọrọ n'ihe gbasara ọkpụrụkpụ nke mgbidi, profaịlụ butted, ọdịdị nke tubes na ihe ndị yiri ya. Na ijikọta bụ n'ezie usoro a na-ahụkarị nke ijikọta alloys dị iche iche iji nweta ihe dị iche iche n'akụkụ dị iche iche nke etiti - Columbus, na weebụsaịtị ha, ha na-erere gị oche oche na ọnụnọ agbụ na isi ọkpọ. - Ọ bụ ndụdụ ndụdụ.
Anyị nwere usoro ụzọ abụọ ebe a, yabụ. Echere m na nke a bụ ihe BMX yinye.- Ọ ga-adị ka ezigbo ọfụma.- Ee, lee ebe ị na-aga. Anyị enwere ike igwu obere egwuregwu? Nwere ike ịgwa m kpọmkwem ihe ọkpọ ọ bụla bụ mgbe ị tụgharịrị wee họrọ otu n'ime enweghị ebe? - Enwere m ike ịnwale. (Ha na-achị ọchị) - Ọ dị mma, mechie anya gị maka nkeji.
Kedu ihe bụ ihe ahụ? - Nke ahụ bụ igwe sterọ tuber, yabụ ọkpọkọ steepụ otu inch! Nwoke di ndu. Kedu ihe ị nwere nke ahụ? Ma nke ahụ bụ ya. Ugboro igwe kwụ otu ebe? - Nke ahụ ziri ezi, ee, yabụ nke ahụ bụ ihe olu na ihe gbagọrọ agbagọ maka ikpochapụ taya ka ukwuu - dị jụụ, ya mere, ndụdụ ndụdụ? - chainstay, ee - chainstay, ee, enwere m nke ahụ.
Enweghi ala tube. - Bịanụ, lee ọkpọkọ ala - Whoa! Lelee nke a. Ka a pụọ.
Anyị nwere ọkpọkọ anyị. - Ka anyị wuru igwe kwụ otu ebe. - Ka anyị wuru igwe kwụ otu ebe.
Nri, anyị nwere ọkpọkọ anyị. Tom, oge eruola ka ọ weld? - Ọbụbeghị. Anyị ka nwere usoro ole na ole anyị ga-aga, yabụ anyị ga-ebipụ ha, kpụzie ha, yabụ belata ha ọnụ.
Anyị nwere geometry anyị, anyị nwere akụkụ ọrụ anyị ma anyị nwere tubing anyị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ usoro ndị a, (NA-ABONỌ) mgbe ahụ, ha ga-anọ n'isiokwu abụọ na-esote n'usoro a ma ị nwere ike ịbịakwute ha naanị na ịpị ebe ahụ na n'okpuru n'okpuru. Ugbu a, anyị chọrọ ezumike tii achọrọ nke ukwuu, mana ka anyị nọ na ya, gbaa mbọ hụ na ị debanyere aha GCN. Iji mee nke a, pịa na ụwa.
Enwere m ike ịme ụlọ igwe kwụ otu ebe?
Ọ dị ọnụ ala karịa iji wuo igwe kwụ otu ebe site n'akụkụ?
Dị ka e nweghịUKiru eru naframelọ igwe kwụ otu ebe. Gịgaakụziwo ihe ndị bụ isi site n'aka onye nwere ahụmahụetiti-wuo, ma gigachọrọ ọtụtụ nkà na ahụmịhe tupu gịnwere iketụlee ịghọ aetitionye na-ewu ụlọ n'onwe gị.
ịkwọ ụgbọala ugwu
Kedu ihe kachasị mma maka igwe?
Dị ka usoro isi aka, ọ bụrụ na mmefu ego gị dị n'okpuru $ 1000 ma ọ bụ ọbụlagodi $ 1300, akụrụngwa- yana ịdị mma-amamihe ị ga - enweta azụmahịa ka mma karịa ịzụrụ ihe ezukọigwe kwụ otu ebe. N'ezie, ịtụle ihe agbakọtaraigwe kwụ otu ebeka N'onwe Gịiruga - ebute ihe nhọrọ ga - eme tupudị ọnụ ala karịana 99% nke ikpe.
Njem, nha ụkwụ, ụdị igwe kwụ otu ebe na nkọwapụta akụrụngwa. Zụta e-igwe kwụ otu ebe bụ azụmahịa dị mgbagwoju anya tupu ị banye ọbụna n'ime ihe etiti. Na mkpokọta, ọ bụ ọgụ dị nfe dị n'etiti carbon na aluminom, mana ọ bụghị nke ahụ dị mfe Taa, anyị ga-eleba anya na azụmaahịa ihe eji arụ ọrụ a (egwu dị egwu) (egwu dị egwu) N'oge gara aga, igwe kwụ otu ebe gafere wiil igwe, Karịsịa mgbe ha jikọtara ya na ihe osise dị nro agbanweela ọtụtụ n'ime afọ ole na ole gara aga.
Onwere ihe igwe mara mma nke oma nke alumini di ya, nke bu eziokwu nye ufodu udiri o siri ike ighota ihe di iche na uzo nke igwe ugbo ala na igwe igwe. Echere m, lelee anyịnya igwe abụọ a si Pụrụ Iche, Levo na carbon na Levo na aluminom. Ma ọ bụ ikekwe Mondraker aghụghọ na carbon ma ọ bụ aluminom.
O siri ike ịhọrọ. O doro anya na e nwere ụfọdụ ụdị ndị na - anaghị ahọrọ iwu ụgbọ ịnyịnya agha ha na carb Ya mere echere m na azịza nye ajụjụ ndị ahụ dịịrị gị na nke ahụ, ị ​​na-achọ ọdịdị ahụ ka ọ bụ? Ọ bụ otu n'ime isi ihe na-eme mkpebi ndị mmadụ. (adụ egwu) eMTB? Ọfọn, ikekwe ọ bụghị, gram dị mkpa ugbu a na igwe kwụ otu ebe ugwu, ọkachasị na ọzụzụ dịka obe-obodo ma ọ bụ enduro, mana ị ga-akwụ ụgwọ maka ya, ọkachasị na ndenye akụrụngwa.
Na mkpokọta, carbon dị mfe karịa alloys maka otu ike ahụ, mana ọ bụ azụmahịa dị mgbagwoju anya. Ihe banyere e-anyịnya igwe bụ na ibu ọdịiche dị n'etiti dị iche iche anyịnya igwe nke dị iche iche ụdị bụ n'ezie nnọọ nnukwu, otú etiti ihe onwunwe nwere obere nke mmetụta karịa ihe dị ka moto ụdị na batrị ikike. Dịka ọmụmaatụ, batrị elekere 500 watt dị ọkụ karịa batrị elekere 700 watt, mana ọ bụrụ na ị na-achọ uru elele, nke ikpeazụ ga-eme.
Carbon ọ dị ike karịa alloy ma ọ bụ ve rsa? Nke a siri ike, ọ dabere n'ezie na ndị mmadụ na-azụ ahịa ahụ dum, dabere na ndị na-emepụta ya, dabere na ihe eji eme yana ọtụtụ ihe ọ dabere na usoro nrụpụta ọ bụla. Eleghi anya ajụjụ ka ukwuu ma ọ bụ ajụjụ dị iche maka unu, gịnị bụ ebumnuche nke igwe elektrọnik gị? Na mkpokọta, carbon na-achọ ịgbawa n'okpuru mmetụta mgbe alloys na-agbanwekarị, mana azụmahịa niile dị na nhazi igwe gị, ị nwere ike ịnweta carbon siri ike ị nwere ike ịnweta alloys siri ike. (Joy Music) ihe na-ewetara anyị isi na-esote na otu n'ezie, dị ezigbo mkpa, olee otú etiti ahụ na-adị mgbe ị na-agba ịnyịnya? Na-enweghị mgbaghara, osisi na wiil siri ike nwere ike ịbụ ezigbo iru ala na-agba ịnyịnya, na ndị ọzọ kilomita anyị na-ekpuchi anyị e-anyịnya igwe, nkasi obi dị ezigbo mkpa.
Yabụ kedu ihe ga-adaba adaba? Ugbu a, ọ bụghị ihe nzuzo, ọ maara nke ọma na ụfọdụ ụdị kwenyere na nkwesi ike nke igwe kwụ otu ebe bụ ihe niile p Resscamps, ebe onye njikwa ahịa nyere ihe ngosi wee sị, “Igwe kwụ otu ebe a dị ọtụtụ okpukpu karịa nke afọ gara aga. ”N’ebe ahụkwa, ọtụtụ ndị odeakụkọ nọ n’ebe ahụ na-asị:“ Mba! ”Ihe bụ isi bụ na nguzozi n’etiti mgbanwe na nkwesi ike bụ nka, ọ bụghị nka. Onye obula emeela ya.
Ma dị ka ikike kwesiri ekwesi na Nweta ikike kwesịrị ekwesị? Kedu ihe na-agbanwe agbanwe, kedu ihe siri ike? Nke ahụ dabere na ahụmịhe na ọtụtụ n'ime ya. Ugbu a, ka anyị gosipụta ọdịiche dị n'agbata mgbanwe mgbanwe siri ike dị ezigbo mfe. Ọfọn, ndị a bụ abụọ carbon dị iche iche si Specialized.
Yabụ ọ bụrụ na ị lelee ihe a ebe a, ọ na-agbada n'ụzọ dị mfe na ntụziaka ahụ, ebe ị na-eme ule gbagọrọ agbagọ na ya, ọ siri ezigbo ike ịgbagọ. Ihe a, n'aka nke ọzọ, dị ezigbo mma na ntụziaka a, ebe ọ bụ n'ezie na ọ na-agbanwe agbanwe na ntụziaka a. (egwu na-ada ụda) Ugbu a, ọ bụrụ na anyị elelee ego a na-etinye na ihe dị iche iche n'ozuzu ha? , Carbon bụ ọkụ ha dị oke ọnụ karịa igwe kwụ otu ebe ma mgbe ahụ lelee ụdị dị iche iche, m na-ekwu na ụfọdụ ụdị anaghịdị eme ka anyịnya igwe carbon ebe ụfọdụ ụdị anaghị eme igwe igwe.
Isi ala bụ carbon, ee, n’ozuzu ya, ọ dị ntakịrị? dị oke ọnụ. Nke a bụ aghụghọ aghụghọ. Ugbu a, anyị niile na-anụ akụkọ ụjọ ndị ahụ banyere ọkpọkọ isi na-atọghe ma ọ bụ na-agbachi ụkwụ.
Ihe nzuzo dị ebe a bụ ime ụlọ gị na ika ahụ, lelee ọgbakọ ndị ahụ wee hụ ma ọ bụrụ na akara ngosi nwere ezigbo ahụmịhe na amamịghe nke imepụta carbon. Ah, nke ahụ bụ ajụjụ aghụghọ, ọ bụghị ya? Dum ihe Isiokwu nke Ekliziastis na anwụ ngwa ngwa. Ọ dị mma n'ozuzu, dịka m kwuru na mbụ, carbon na-agbaji na mmetụta, ebe alloys na-ehulata ma ọ bụ gbanwee n'okpuru mmetụta dị oke njọ, n'agbanyeghị.
Mana ma eleghị anya, ajụjụ ahụ dịịrị gị, onye ọkwọ ụgbọ ala, ị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala dị arọ nke na-anya ala nke aghụghọ, nke nwere nsogbu, okwute okwute? Nwere ike ịbụ ụdị onye na-agba ịnyịnya nke kwesịrị ịgba ịnyịnya alloy, mana nke ahụ bụ naanị nzọ ị maghị ma ọ bụrụ na ị ga-ada, yabụ ị ga-enyocha akwụkwọ ikike ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe na-enye gị na igwe kwụ otu ebe. ma ọ bụ ma eleghị anya lelee eku nchedo nke igwe kwụ otu ebe, n'ihi na ọ nwere ike n'ezie tinye a otutu ihe anwụ ngwa ngwa gị etiti eMTBs. Cheta, enwekwara igwe nchara, a ga-enwekwu nke ahụ na ọ bụghị n'ọdịnihu dị anya isiokwu a yiri ka ọ bụ ihe niile gbasara itinye aka na nkwupụta ahụ, yabụ azụmahịa dị mgbagwoju anya wee sonyere mkparịta ụka ndị dị n'okpuru ebe a. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele eMTB carbon fiber, na Levo, ma ọ bụ wiilị alloy, Canyon Spectral dị ala ebe a.
O siri ike ịgbakọta igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụghị nke ahụsiri ike, anyị na-ekwe nkwa. Ga-achọzukọtaụkwụ ihu, ụkwụ, aka na ịnọdụ ala, ị ga-enyocha usoro breeki na gia.
Ọ na-efu karịa iji wuo igwe kwụ otu ebe gị?
Ọnụ. Ihe omumanwerebụrụ na ọụgwọna-erughị ịzụtakazuru ezuigwe kwụ otu ebe, atụlere yanaụlọotu site nakaetiti. Nke abueziokwu makaọtụtụakụkụ. Na azụmahịa ndị dị na okpokolo agba na ihe ọkụkụ,ụlọelukaetitinwere ikemgbe ụfọdụ bụrụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa.Jenụwarị 24. Dec 2019
Assembchịkọta igwe kwụ otu ebe siri ike?
O siri ike ịme igwe igwe kwụ otu ebe?
Ọ ga-adị mmasiri ikema karie ikike m dị ka onye na-ewu ụlọ iji nwalee ma kọwaa etu esi agacha ma ọ bụ braze. Ekwadoro m ka ị mụta ịgbado ọkụ ma ọ bụ braze site na mmadụ ihu na ihu na omume (ọtụtụ). Mụ onwe m mụtarawuo igwesite na UnitedIgweLọ akwụkwọosisi ụlọklas.
Walmart ọ na-eme mgbakọ igwe kwụ otu ebe?
Ee - ụlọ ahịa anyị na-ezukọta ndị nnọchi anya ebe ha na-ere ya ebe ahụgabụrụ otu dị. Dị ka ndị ọzọnweekwuru, nazukọtabụ (eleghị anya) ọ bụghị aigwe kwụ otu ebearụzi, otú ahụ ka m concur na nkwanye kanweeha nyochara, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Ka m kwesịrị m igwe kwụ otu ebe kpọkọta?
Naazịza na-adabere. Ọ bụrụ na ịnweeịjụiheajụjụ, mgbe ahụ na ọ bụ eleghị anya ezigbo echiche. Ọtụtụanyịnya igwechọrọ pụrụ iche ngwaọrụtinye ọnụma ọ bụ idozi. Otú ọ dị, ọtụtụ n'imeiheNtanetianyịnya igwena-emechi emechigbakọtaramgbe ịnwetaha ka ọ dabere na onye nrụpụta.
Kedu ụzọ kachasị mma maka ụlọ igwe eji agba igwe?
Ebe ọ bụ na ọtụtụ igwe eji agba igwe eji agba igwe agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba abụghịrị isi, ọ ga-abụ ihe ijuanya nye anyị. Anyị na-akwado ya maka onye ịnụ ọkụ n'obi na-agba ịnyịnya ígwè, onye na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe, onye njikwa ụlọ ahịa, ma ọ bụ nwa akwụkwọ na-achọ ịghọ ọkachamara na-ewu ụlọ.
Kedu ụdị igwe ị ga-arụ n'ụlọ akwụkwọ ịgba ịnyịnya ígwè?
Studentsmụ akwụkwọ nwere ike ịmepụta igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ igwe nnwale. Mụ akwụkwọ ndị mechara nke ọma na klaasị a ga-ahapụ ya n'ụdị igwe titanium mara mma dị elu.
Kedu klas kacha mma maka ụlọ etiti?
Onweghi - nke a bụ klas ọkwa ntinye. Ebe ọ bụ na ọtụtụ igwe eji agba igwe eji agba igwe agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba abụghịrị isi, ọ ga-abụ ihe ijuanya nye anyị.